သာလွန်ဇောင်းထက်| January 17, 2013 | Hits:1,456
| | နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဌာနချုပ်တွင် ဧရာဝတီသတင်းဌာန၏ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားနေသော ပါတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦး (ဓာတ်ပုံ – သာလွန်ဇောင်းထက် / ဧရာဝတီ)
စွမ်းအားရှင်နဲ့ မပတ်သက်ပါဘူးဆိုတဲ့ ဦးအောင်သောင်းနဲ့ ...ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို အရေးယူရန် တောင်ဥက္ကလာ ပြည်သူများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည်အခြေခံဥပဒေကို NLD ပြင်လျှင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ထောက်ခံမည်ဟု ဦးအောင်သောင်းပြောကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ ပြင်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးရှုံးနိမ့်မှု တွန်းအားတခုဖြစ်ဟုဆို နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Tide January 17, 2013 - 12:32 pm	What are they going to write? Propaganda after propaganda? We have seen it already. Are they going to tell that Than Shwe’s way to democracy is still the best? If they all quit, it will be the best contribution they can do best for the nation.